लघुवित्त को “ल” पनि न जान्ने अनि लघुबित्त सम्बन्धित भ्रम फैलाउने के उचित होला ! – Hamropati.com
प्रकाशित मिती: 11-23 at 5:43pm
केहि दिन यता नेपालको रास्टृय दैनिक पत्रीका र अनलाईनहरु लघुबित्तलाई सगिन आरोप लगाउदै आलोचनामा उत्रेको पाइयो । ति लेखहरु हेर्दा, पक्कै ति लेखहरु धनी शहरीयाहरु मार्फत निर्देसित छ भन्ने पनि लाग्छ । तर यो पङ्तिकार ति शहरीयाहरुको बिरुद्दमा कलम चलाईरहेको छैन मात्र ग्रामिण क्षेत्रमा लघुबित्त को प्रभाब को बारेमा लेख्न खोजिरहेको छ ।
नेपालामा आज पनि बिपन्न बर्गको जमात ठुलो देखिन्छ । नेपाल मा त्यही बिपन्नबर्ग लाई सम्पन्न बनाउन बिभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास भैरहेको छ । जुन प्रयास मध्य सबै भन्दा प्रभाबकारी र दिगो प्रयास भनेको लघुबित्त नै हो । बिसेसगरी ग्रामिण क्षेत्रका परिवार हरुमा लघुबित्त निकै प्रभाबकारी रुपमा अगाडी बढिरहेको पाइन्छ । अझै रास्टृय निती २०६४ को बुदा न १२ मा त”निजी क्षेत्रमा लघुबित्त सेवा प्रदायक सस्थाहरुको कार्यक्रमको लागी प्रोत्साहन गरिने छ ।” भन्ने बाक्य स्पस्ट सँग राखिएको छ ।
आज केहि मिडियामा लघुबित्तको बारेमा नकारात्मक प्रभाभरुको समाचार आइरहदा समाज मा देखिएको सकारात्मक प्रभाबको बारेमा बोल्ने जमात किन देखिदैन ?के ग्रामिण समाज मा लघु उध्यमी लाई लघु बित्तले दिएको सेवा को कुनै हिसाब किताब नै छैन ? केहि महिना अगाडी लघुबित्त को एउटा सानो कार्यक्रम चितवन गितानगरकी साबित्री साप्कोटाको सफलतालाई भाइरल बनाउने कस्ले ? काभ्रे पनौतिको राजेन्द्र कुवरको कथा लाई चित्रण गर्दिने कस्ले ? यि त लघुबित्त बाट प्रगती गर्ने हरुको प्रतीनिधी पात्र मात्र हुन ग्रामीण भाग मा लघुबित्त को महत्व त तिनिहरुलाई थाहा छ जसलाई बैसाखमा मकै छर्न १० हजारको जरुरत पर्छ, अदुवा लगाउदा २० हजारले रोकिन्छ्, भैसी पालेर दुग्ध बेच्न लाई ८० हजार को जरुरत पर्छ । अझै गएर शोध्नु होस १ लाख लगेर समान्य पसल चलाएर मासिक किस्ता तिर्ने हरुलाई । त्यसैले यो पङ्तिकार शहर र सदरमुकामको करोड को घर मा बसेर लघुबित्त को बिरोध गर्ने हरु सँग अचम्म मान्दैन ।
अन्तमा शहर को अग्लो घरमा बसेर लघुबित्तको धारणा बनाउनु अगाडी ग्रामिण बस्तिमा पुग्नुहोस अनि उनिहरुको दैनिकी सँग जोडिएको लघुबित्त को बारेमा शोध्नुहोस । मिडियाले पनि हल्लालाई भन्दा बास्तबिक कुराहरु ल्याउन सकुन्,अनी लघुबित्तलाई कमाइखाने भाडो सम्झेका हरुले पनि यस्लाई अलिकती परिमार्जित गर्दै लग्नु जरुरी छ । यो सबालामा सबैको चाडै ध्यान जाओस ।
(लेखक- हाल स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय पनौती(काभ्रे)का शाखा प्रबन्धक हुन् )